Apple gọrọ na ọtụtụ nde akaụntụ iCloud emebila | Esi m mac
Ruo ụbọchị ole na ole, ọtụtụ blọọgụ teknụzụ kwughachiri asịrị nke a na-ekwu na ụmụ nwoke Cupertino na-anata el blackmail nke otu ndị omempụ Turkish, nke achọrọ ka ha gafee $ 75.000 na bitcoins. Ndị a ebubo hackers kwuru na ha nwere ike ịnweta akaụntụ iCloud niile nke ụlọ ọrụ ahụ, nke ha nwekwara ike ịnweta nkọwa akụ niile echekwara na Apple ID. O doro anya na ọ bụrụ na ị gụchara akụkọ ị chere na enweghị m isi ma ọdụ.
Ọ bụ ezie na ọ dịwo ogologo oge karịa, Apple kwadoro na ọ dịghị oge iCloud akaụntụ e mie ala n'agbanyeghị ebubo na-egosi na ndị na-agba ọsọ ezigara ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na nkwupụta ahụ bipụtara na Fortune, "Akaụntụ iCloud emebibeghị n'oge ọ bụla, enweghị mmebi nchebe ọ bụla na sistemụ metụtara iCloud ma ọ bụ NJ Apple."
Na-amalite na, ma ọ bụrụ na a hacker nwere ohere niile iCloud akaụntụ naNnapụta agaghị abụ obere ihe dị mkpa, ma ọ gaara abụwo ego karịrị nnọọ ihe a sịrị na a chọrọ. Ndị omekome ahụ bụ akụkụ nke otu The Turkish Crime Family. Akụkọ mbụ metụtara mbanye anataghị ikike a metụtara 300 nde akaụntụ. N’ime awa ole na ole, ọnụ ọgụgụ ahụ mụbara ruo ihe ndekọ nde 627.
Ndị otu a chọrọ ka Apple kwụọ $ 75.000 na bitcoins tupu Eprel 7 ma ọ bụ na ha agaghị amalite ịsachapụ ngwaọrụ site na ime ka ọha na eze mara ozi niile echekwara na ha. Otu a bipụtara ule ndị Apple kpebiri abụghị mkpebidị ka ndị a dị mfe email captures.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple gọrọ na nde iCloud akaụntụ emebila
Weghachi "emeghe playlist na ọhụrụ window" atụmatụ na iTunes 12.6 na macOS